The Seattle Of Semalt On Website Hacking: Ihe Ị Kwesịrị Iji Mara
Njikọ ndị na-enye gị ahịa dị mma karịa izu ohi njikọsite na ndị asọmpi gị. Ọ dịghị mkpa ịtụ ụjọ ma ọ bụrụ na onye na-asọmpi gị na-eme ka ị pụta n'ọnọdụ nke ọkwa. Na-ewere ọrụ SEO gịọkwa ọzọ ga-enweta gị n'ọnọdụ gị. Ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ na inye ezigbo ọrụ ọrụ na ngwaahịa ndị ịndị asọmpi anaghị enye gị ga-eme gị ka mma - b inspired by poppy 2017.
Igor Gamanenko, onye ọkachamara na-eduzi Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-akọwa ihe kacha mkpa nke mkpokọta weebụ na nchebe.
N'oge a, nchọta Google algorithm nwere ụzọ nke ịchọpụta akwụkwọ-esote ọdịnaya nana-echebara ha echiche. Ịchọghị ka Google ghara ịpụpụ gị na ya n'ihi arụmọrụ. Tupu ị gaa SEO, ọ dị mkpa ịmụta ihe ndị bụ isizere inwe nsogbu na mkpọsa SEO gị. Dịka ọmụmaatụ, ụdị mkpesa ụlọ ọrụ na ebe hacking dị ugbu a. Ọ bụ nhụsianyana-hacked site a obi hacker, na-efunahụ ịchịkwa gị na ebe nrụọrụ weebụ nche.
Laa azụ n'afọ 2014, akụkọ a hapụrụ na e nwere ihe karịrị otu ijeri na ebe nrụọrụ weebụ naỊntanetị ahụ. Ọ dị ezigbo mma. Dormancy, ọtụtụ ndebanye aha na ebe nrụọrụ weebụ weere ngwa ngwa ma guzosie ike na 2015 site na ịkụ akaNde 994. Onu ogugu ahia nke ndi ahia ahia na-aga site na SEO kwa o bula n'ihi osobo ulo oru. Ihe dịka 1% nke weebụsaịtị nwere oriana hacked n'ihi na enweghị Ngosipụta nke Mgbagwoju anya. Nke ahụ dị ka nde 8 na ebe nrụọrụ weebụ na-esi na azụmahịa dị ka a n'ihi nke hacking.
N'ụzọ doro anya, ebe nrụọrụ weebụ na-adị mfe ịnwụ na nje n'ihi ihe ndị na-esonụ:
Omume nke software
Nweta njikọta nke atọ
Ịnweta akara site na iche iche
Nkọwapụ Vs Forensics
Ọhụụ na-adị na SEO ruo ogologo oge.otú otu ihe mere na hacking mere, Ọzọkwa, onye mere n'ezie hacking. N'aka nke ọzọ, ntinye aka, gụnyere otu esi ebute ọrịawepụrụ. Ntọhapụ enweghị ike ime n'enweghị ndị na-ahụ maka ọdịnihu na ndị omekome. Enweghi ike itinye nkwụghachi aka n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'enweghị ọnụnọ nkeezi uche dị mma.
Ulo oru buru ibu enweghi ike ime n'enweghi ndi ozo. Nchedo weebụ gị dị ezigbo mkpa.Nke a bụ ihe ndị mere na-egosi ihe mere i ji chọọ ndị nlekọta anya maka nzukọ gị iji wepụ hacking na ọrịa gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ bụrụ na ị kwenye, ị ga - achọ ndị na - ahụ maka ọdịnihu iji dozie usoro ịmekọrịta gị.
Ịbụ onye na-akwado PCI, ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị hụghị ndị na-ahụ anya.
Ọchịchọ ịghọta otú otu nkwekọrịta si mee.
Olee otú e si edozi nchedo weebụ
Ebe nrụọrụ weebụ hacking nwere ike ịbụ ihe na-adọrọ mmasị. O doro anya na ụlọ ọrụ ndị akwụnanwere ihe ngosi nke hacking, ma echeghị na ọrịa ahụ ga-agbasa na ebe nrụọrụ weebụ ha. Inweta akara nke azụmahịa gị pụtarannukwu ihe. Iji nweta nchịkwa, onye na-eme ihe nchọgharị na-eme usoro nyocha nke aha njirimara na paswọọdụ gị. A ga-ebufe nzere gịsite n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ site na ntanetịime kwesịrị ekwesị nke onye na-egwu ihe eji eme.
Ụzọ ọzọ a ga-esi kpochapụ bụ site na ngwanrọ software. Ọ bụghịga-abụ ngwanrọ arụnyere gị, kamakwa ihe nchọgharị gị. Onye nwere ike ịnweta ike ịnweta nzere gị site n'ịchịkwa ihe nchọgharị gị.
Dịka onye nwe ụlọ ọrụ weebụ, ịkwesịrị ịrụ ọrụ na iji chebe weebụsaịtị gịhacked. Na-eme ka o doo anya banyere ndị ọbịa na-esi enweta ụlọ ọrụ azụmahịa gị bụ otu ihe nwere ike inyere gị aka ichebe saịtị gị. Gbaa mbọ hụ na ọ dịghịnzere na-egosipụta. Mee ka onye na-ahụ maka mmekọrịta gị site na ịdebe nchekwa weebụ gị.